အဆိုပါ EXCEL ကိုဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ဘယ်လို - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုဖိုင်အရွယ်အစားအတွက် Decrease
မည်သည့် software ကို install လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြည့်စုံကို automation နှင့် simplifying အသုံးပြုပုံရိုးရှင်းသောအလုံအလောက်အလုပ်အကိုင်လှပါတယ်။ သို့သော်ဤသည် Microsoft Office ကိုတပ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများမှကြွလာအတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ ဤတွင်အရာရာနူးညံ့နှင့်တိကျစွာအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။
က MS PowerPoint ကို standalone application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လမ်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းအားချက်ချင်းရကျိုးနပ်။ သာအခြားစွန့်ခွာခြင်းဖြင့်ဒီ component တစ်ခု install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် - ဒါဟာလုံးဝကိုသာမိုက်ကရိုဆော့ဖရုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလုပျနိုငျကွောငျးအများဆုံးအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်သာဤအစီအစဉ်သည်နည်းလမ်းနှစ်ခုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်:
တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် PowerPoint ကိုအသုံးပြုပါရန်။
ကျနော်တို့ကိုလည်း Microsoft က Office ကိုအထုပ်ကိုယ်နှိုက်အကြောင်းကိုဆိုပါတယ်ရပါမည်။ အလွန်အန္တရာယ်ထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်နှင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုင်စင်ရဗားရှင်းသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ခိုးကူးရုံးကို အသုံးပြု. နှင့်အတူပြဿနာကိုပင်, ကတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုက်ဆံရှုံးပေမယ့်ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုရိုးရှင်းစွာတည်ငြိမ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဒုက္ခအများကြီးကယ်မနှုတ်နိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကို။
အဆိုပါ Microsoft Office software ကိုအထုပ် Download
ဒီ link ဘို့သင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် Microsoft Office ကို 2016 ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီး, နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ရုံး 365. စာရင်းသွင်းခြင်း, အကဲဖြတ်ဗားရှင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
program ကို install လုပ်ခြင်း
အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, MS Office ၏အပြည့်အဝတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ 2016 ကနေအများဆုံးအရေးပေါ်အထုပ်ဖြစ်စဉ်းစား။
Installer ကိုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးတပ်မက်လိုချင်သောအအထုပ်ကို select ရန်သင့်အားပြ။ ငါသည်အဦးဆုံးသော option ကိုလိုအပ်တယ် "Microsoft Office ... ".
ကနေရှေးခယျြဖို့နှစ်ခုခလုတ်ရှိလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံး - "တပ်ဆင်"။ ဤသည်ဂျအလိုအလြောကျစံသတ်မှတ်ချက်ဘောင်နှင့်အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ - "ပြင်ဆင်မှုအား"။ ပိုပြီးတိတိကျကျအားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းညှိရှိလိမ့်မည်။ ဒါဟာဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်အထူးသအရာကိုသိရန်ဤအချက်ရှေးခယျြဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
လူအားလုံးတို့သည် tabs များအားလုံးကို settings ကိုပြတင်းပေါက်ရဲ့ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်ရှိရာသစ်ကိုစစ်အစိုးရကသို့သွားပါ။ ပထမဦးဆုံး tab မှာ, ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာစကားတစ်ခုကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
tab ကို "တပ်ဆင်ခြင်း Options ကို" သင်မလိုအပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျကို right-click နှိပ်ပြီးအပိုင်းများနှင့်သင့်လျော်သော option ကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်း၏မူလအစမစ်တပ်ဆင်ခြင်း, အဆုံးစွန်သော ("ရရှိနိုင်မ") - လုပ်ငန်းစဉ်ကာကွယ်ပါ။ ထိုသို့ Microsoft Office အပေါငျးတို့သမလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်ကို turn off ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကဏ္ဍများသို့ခွဲခြားပေးသည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါတစ်ဦးရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့ option ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်, အပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်သတ်မှတ်ထားအထဲတွင်ပါဝင်သည့်အပေါငျးတို့သဒြပ်စင်အဘို့ရှေးခယျြမှုကိုတိုးချဲ့။ သငျသညျအထူးသဖြင့်ဘာမှ disconnect ဖို့လိုအပ်ပါကအပေါငျးလက်ခဏာအတူခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကဏ္ဍများကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ပြီးသားရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုတပ်မက်လိုချင်သောပစ္စည်းကိုရန် setting များကိုလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။
တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုရှာဖွေကယ်နှုတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် "Microsoft မှ PowerPoint"။ သင်ပင်ရှိသမျှသည်အခြားသောဒြပ်စင်များပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း, သာသူ့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Next ကို tab ကိုဖြစ်ပါတယ် "File တည်နေရာများ"။ ဒီနေရာတွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်လိုက်တဲ့ destination ဖိုင်တွဲရဲ့တည်နေရာကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွဲရန်အအမြစ် drive ကို - installer ကိုကို default ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရပ်မှ install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးက "Program Files"။ ဒါကြောင့်စနစ်တကျမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကပရိုဂရမ်အတွက်တခြားနေရာဘေးကင်းကြလိမ့်မည်။
"User Information" ဆိုတဲ့ ဒါဟာသင်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုသူများအယူခံလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အားလုံးအဲဒီ settings တွေကိုပြီးနောက်, သငျသညျကို click နိုင်ပါတယ် "Install".
installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကြာချိန်ပါဝါယူနစ်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ကြောပိတ်ဆို့မှုကို၏ဒီဂရီပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပေမယ့်ပင်အားကြီးသောအလုံအလောက်စက်တွေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအများအားဖြင့်အတော်လေးရှည်လျားလှပါတယ်။
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, တပ်ဆင်ခြင်းပြည့်စုံသည် ဖြစ်. , Office ကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်တို့သည်လည်း Microsoft က Office ကိုပြီးသား installed သည်အဘယ်မှာရှိမှုကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မရွေးအစိတ်အပိုင်းများများ၏စာရင်း PowerPoint ရွေးချယ်ထားသည်။ ဒါဟာသင်တစ်ခုလုံးကို program ကို reinstall ရန်ရှိသည်မဆိုလိုပါ - installer ကို, ကံကောင်းထောက်မစွာ, တကယခင်ကသတ်မှတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။
တပ်ဆင်၏အစအဦးမှာစနစ်ပဲ installed ရမညျဟုမေး၏။ သငျသညျတဖနျပထမဦးဆုံး option ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခုတော့ installer ကိုက MS Office ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခြားနည်းလမ်းအကြံပြုကြောင်းစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးလိုအပ် - "အင်္ဂါရပ်များ Add သို့မဟုတ် Remove".
အခုတော့ tabs များနှစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည် - "ဘာသာစကား" နှင့် "တပ်ဆင်ခြင်း Options ကို"။ ဒုတိယတှငျကြှနျုပျတို့ပြီးသားက MS PowerPoint ကိုရွေးချယ်ပြီး click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရာအကျွမ်းတဝင်အင်္ဂါရပ်သစ်ပင်, ဖွစျလိမျ့မညျ "Install".
ပုံမှန်အားဖြင့် Microsoft က Office ကိုတစ်ဦးလိုင်စင်ကို install pads မပါဘဲတတ်၏။ သို့သော်ခြွင်းချက်ရှိပေမည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်ရေတိုစာရင်းပေးထားရပါမည်။
Failed installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို
အများဆုံးမကြာခဏပြဿနာဖြစ်ပွား။ သူ့ဟာသူအသုံးပြုပုံ installer ကိုအလွန်ခဲကိုချွတ်ရရှိသွားတဲ့။ ဒါကြောင့်အပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်များ, အကြီးအကျယ် loaded မှတ်ဉာဏ်မတည်ငြိမ်မှု OS ကိုကျင့်သောအကျင့်, အရေးပေါ်ရပ်တန့်နှင့် - အများစုမှာမကြာခဏတရားခံ Third-party အချက်များဖြစ်ကြသည်။
option တခုစီဖြေရှင်းတစ်ဦးချင်းအပေါ်အခြေခံဖြစ်သင့်သည်။ အကောင်းဆုံး option ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုခြေလှမ်းရှေ့တော်၌ထိုကွန်ပျူတာသည် Restart reinstall လုပ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင် program ကိုကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြွတ်တလွှားက၎င်း၏အကွဲကွဲအပြားပြားမှ operate မည်မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စနစ်မဆိုအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးရှုံးနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။
ဖြေရှင်းချက် - သင်က MS Office ကို install လုပ်ပြီးသားအရာပေါ် disk ကို defragment ။ ဒီကကူညီမပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျပလီကေးရှင်းတစ်ခုလုံးကို suite ကို reinstall သငျ့သညျ။
ဤပြဿနာကိုပထမဦးဆုံးဂျအများဆုံးနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအသုံးပြုသူများလေယာဉ်ပျက်ကျမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်စနစ်ကအားလုံးအောင်မြင်စွာကယ်နှုတ်သောမှတ်ပုံတင်ထဲမှာ program ကို install လုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် data တွေကိုထည့်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အထုပ်အဘယ်သူအားမျှအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, နှင့်ကွန်ပျူတာကိုယ်တိုင်ကခေါင်းမာမာသောသူအပေါင်းတို့သည်စရိတ်နှင့်အလုပ်လုပ်ဒဏ်ငွေယုံကြည်သည်နှင့်ဖယ်ရှားသို့မဟုတ် reinstall လုပ်ဖို့ငြင်းဆန်။
ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် "Restore"အခန်းတွင်ဖော်ပြထားပြတင်းပေါက်အတွက်ရွေးချယ်စရာအကြားပုံပေါ်ဘယ် "တစ်ဦး PowerPoint ထည့်သွင်းခြင်း"။ ဒါဟာအမြဲလုံးဝကို format နဲ့ Windows-install ရမည်ဖြစ်သည်အချို့ကိစ္စများတွင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင်ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေနှင့်အတူ registry ကိုအမှားအယွင်းများကို fix, တတ်နိုင်သော, CCleaner ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ရုံးကိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော, တစ်ခါတစ်ရံသူမမှန်ကန်တဲ့ data တွေကိုတွေ့အောင်မြင်စွာသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ကြောင်းအစီရင်ခံသည်။
အသေးစိတ်: CCleaner ကိုသုံးပြီး registry ကိုပျော်စေ
ညာဘက်အရပျ၌ right-click လုပ်ပြီး option ကိုရှေးခယျြ - MS Office စာရွက်စာတမ်းများကိုအသုံးပြုရန်လူကြိုက်အများဆုံးလမ်း "Create"ထိုအကြောင်းအရာသည်ပြီးသားရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစီအစဉ်များအစုတခု၏ installation ပြီးနောက်အသစ်ရွေးချယ်မှုများကဒီမီနူးထဲမှာပေါ်လာမဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
အများအားဖြင့်ကွန်ပျူတာကို restart banal ကူညီပေးသည်။
စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲအချို့ updates များကိုသို့မဟုတ် bug ကိုပြီးနောက် activation ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကို၏စံချိန်တင်ကယ်တင်နိုင်ပါ။ ရလဒ်ကိုတဦးတည်း - ရုံးကိုထပ် activation လိုအပ်မှစတင်ခဲ့သည်။
အများအားဖြင့်က banal Re-activation သင်ကလိုအပ်အခါတိုင်းဖြေရှင်း။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်၏အမှု၌လုံးဝကို Microsoft Office ကို reinstall သငျ့သညျ။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး protocols များချိုးဖောက်
ဒါ့အပြင်ပြဿနာပေါ်ပထမဦးဆုံးကို item နှင့်ဆက်စပ်။ တခါတလေရုံးကိုမှန်ကန်စွာမဆိုနည်းလမ်းဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်ငြင်းဆန် installed ။ ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုဖြစ်ပါသည် - ဆိုရှုံးနိမ် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်, သို့မဟုတ် application ကိုတစ်ဦး cache ကိုစောင့်ရှောက်ဘယ်မှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖိုင်တွဲများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မရရှိနိုင်သို့မဟုတ်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်မပေးပါ။
ပထမဦးဆုံးအမှု၌ Microsoft က Office ကို reinstall ပါလိမ့်မယ်။
ကို C: Users [အသုံးပြုသူအမည်] AppData Roaming Microsoft က
ကျနော်တို့ကိုသူတို့သင့်လျော်သောအမည်ဖြင့်များမှာ (ဆော့ဖ်ဝဲအထုပ်အဘို့ရှိသမျှကိုဖိုလ်ဒါသေချာအောင်သင့်ပါတယ် - "PowerPoint", "နှုတ်ကပတ်တော်ကို" ဒါပေါ်) (default settings ကိုမဟုတ် "Hidden"မပါဘဲ "သာလျှင် Read" စတာတွေ) ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီပေါ်မှာ right-click နှိပ်ပြီး properties ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာဖိုင်တွဲများအတွက်ဒေတာ settings ကိုဆနျးစစျသငျ့သညျ။
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်လိပ်စာမှာတည်ရှိပါတယ်မဟုတ်ပါလျှင်သင်တို့သည်လည်း, နည်းပညာဆိုင်ရာ directory ကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် tab မှာမဆိုစာရွက်စာတမ်းကနေရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "File".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, အပိုင်းကိုသွား "သိမ်းဆည်းခြင်း"။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စား "ဒေတာများကို AutoRecover"။ လိပ်စာမှာဒီအထူးသဖြင့်အပိုင်းကိုသတ်မှတ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလုပ်လုပ်ဖိုင်တွဲ၏ကျန်ရှိရပါမည်။ ဒါဟာအထက်တွင်ထုံးစံ၌သူတို့ကိုရှာဖွေစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
အဆုံးမှာငါစာရွက်စာတမ်းများ၏သမာဓိမှခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အမြဲ Microsoft ကနေလိုင်စင်ရဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသင့်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ hacked ဗားရှင်းအမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းပုံ, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကပထမဦးဆုံးအပြေးကနေမမြင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်ကိုယ်နှိုက်ကအနာဂတျမှာခံစားခဲ့ရပါစေနိုင်သောချို့တဲ့အမျိုးမျိုးလုံးဝအချို့ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ကြသည်။